Crittercism: Kormeerka Waxqabadka Codsiga Mobilada | Martech Zone
Cambaareyn waa maaraynta waxqabadka dalabka moobiilka madal loo isticmaalo in lagu kormeero, mudnaanta la siiyo, cilad bixinta, iyo isbeddellada waxqabadkaaga moobaylka. Crittercism wuxuu bixiyaa aragti caalami ah oo waqtiga dhabta ah ee cillad baarista iyo khaladaadka barnaamijka ee guud ahaan iOS, Android, Windows Phone 8, Hybrid iyo barnaamijyada HTML5 ee kormeera 1 bilyan oo isticmaaleyaal firfircoon bil kasta.
Crittercism wuxuu kormeeraa in ka badan 500 milyan oo dhacdooyin codsi ah, wuxuu dabagalayaa in ka badan 100 bilyan oo xamuul ah oo xamuul ah, taas oo u tarjumeysa 30,000 oo dhacdooyin ilbiriqsi iyo dhowr kun oo macaamiil firfircoon ah. Astaamaha waxaa ka mid ah:
OS badan iyo Taageerada Qalabka - iOS, Android, HTML5, Windows Phone, ama barnaamijyo isku dhafan
Real-waqtiga dhabta ah Xogta Weyn - saddex bilyan oo macaamil maalmeed ayaa lagu falanqeynayaa aragtiyo dhab ah, oo waxqabad leh.
Ogeysiisyada Dashboodyada & Warbixinnada - la soco barnaamijyada wax soo saarka waqtiga-dhabta ah. Ku hayso tabta sida ay barnaamijyadaadu u soo fiicnaanayaan waqti ka dib.
Amniga RBAC, Amniga Xogta - xogtu waa aamin oo dhammaadka aqoonsiga isticmaaleyaasha waa la qariyey.
Helitaanka & Korjoogteynta Waxqabadka - kormeer oo sii SLAs waxqabadka masraxa.
Loo dhisay Miisaanka - laga bilaabo dukaamada horumarinta madaxbannaan ilaa shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah.
Tags: androidapmla socodka helitaanka barnaamijkakormeerka barnaamijkawaxqabadka appkormeerka waxqabadka barnaamijkacambaareynData SecurityHTML5 barnaamijyadoodahybridmacruufkaapp mobilemaaraynta waxqabadka dalabka moobiilkaAmniga RBACWindows Phone 8
Fiidiyow: 5 Talaabo oo Lagu Xiriirinayo Xiriirka Dadweynaha